लुम्बिनीसँगै गैँडा, गोही र गुराँस | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
लुम्बिनीसँगै गैँडा, गोही र गुराँस
२०७० कार्तिक ८, शुक्रबार ०२:४५ गते
साविकमा कामकाजले व्यस्त हुनुपर्ने कर्मचारी वा पेसाकर्मी वर्गमा लामो बिदाको अवसर पारेर देशभित्र वा बाहिर घुम्न जाने प्रचलन बिस्तारै फैलिँदै छ । हिजोआज घुम्ने चलन दसैँतिहार मनाउने रमाइलो विकल्पका रुपमा पनि स्थापित हुँदै गएको छ । त्यस्तो घुमघामका लागि उपयुक्त दुई प्रख्यात स्वदेशी गन्तव्यहरुलाई गाँस्दा कसो होला ? प्रसङ्ग लुम्बिनी र चितवनको हो । यी दुवै ठाउँ तराईका दुई विश्वसम्पदामा सूचीकृत क्षेत्र हुन् । एउटा सांस्कृतिक, अर्को प्राकृतिक । यिनीहरुलाई एकै ठाउँमा गाँस्दा गौतम बुद्ध, गैँडा, गोही र गुराँसको संगम बन्छ । कम्तीमा एक साताजति समय छ भने यी आकर्षक थलोहरुको घुमघाम धूमधामले पूरा हुन्छ ।
यात्राको सुरूवात चितवन, काठमाडौँ, बुटवल वा भैरहवा जहाँबाट गरे पनि हुन्छ । नारायणगढ बजारबाट बसमा करिब १ सय ५० किलोमिटर दूरी पार गरेपछि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पुगिन्छ । आरामदायी यात्राका लागि साढे चार घन्टाजति समय लाग्छ । काठमाडौँलाई प्रवेश–बिन्दु बनाउने हो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३० मिनेटको दृश्यमग्न आन्तरिक उडानपछि भैरहवा पुगिन्छ । विमानस्थलबाट अर्को ३० मिनेटको बसयात्राले १८ किलोमिटर पश्चिममा पर्ने लुम्बिनी पु¥याउँछ ।
लुम्बिनीमा सामान्यदेखि पाँच तारेसम्म अनेक मूल्य र मार्काका होटल पाहुना पर्खेर बसेका छन् । त्यहाँ पुगेपछि कम्तीमा तीन दिनका लागि बजेटअनुसारको होटल बुक गरिहाल्नु बेस । लुम्बिनीमा प्रतिदिन खान–बस्न ५ सयदेखि ५ हजार रूपैयाँसम्म लाग्ने श्रेणी–श्रेणीका होटलहरु ५० भन्दा बढी छन् । बासको टुङ्गो लागेपछि पथप्रदर्शक र रूचिअनुसार रिक्सा वा मारूती खोजेर घुमघाम थाल्न सकिन्छ ।
लुम्बिनी सर्किटअन्तर्गत प्राचीन मह¤वका नौ प्रमुख गन्तव्यहरु छन् । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट यो सर्किटको यात्रा सुरू हुन्छ । समुद्र सतहबाट ६०० मिटर दूरीमा अवस्थित पश्चिमी तराईको यो भूमिलाई सन् १९९८ मा विश्वशान्तिको मुहान घोषित गरिएको थियो । अशोक स्तम्भले सजिएको लुम्बिनी बगैँचाका दर्शनीय सम्पदाहरुमा मायादेवी मन्दिर, मायादेवी स्नान पोखरी, प्राचीन वृक्ष र तत्कालीन दरबारका भग्नावशेषहरु पर्दछन् । मायादेवी मन्दिरको पुरानो भग्नावशेष केही वर्षअघि मात्र उत्खनन् गरी निकालिएको थियो, जसमा मायादेवी र बुद्धका पुराता¤िवक कलाकृतिहरु देख्न पाइन्छ ।
भेटिएका कलाकृृतिहरुलाई जस्ताको तस्तै रहन दिइएको छ । त्यसो त, नवनिर्मित चैत्य र गुम्बाहरुले पनि लुम्बिनीको आकर्षणलाई विविध चिनारीका साथ चम्काएका छन् । प्यागोडा शैलीको चिनियाँ गुम्बा, म्यानमारका बौद्धमार्गीहरुको योगदानको प्रतिफल म्यामार गुम्बा, बुद्धका लोभलाग्दा आकृतिहरु अंकित कोरियन गुम्बा तथा जापान, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र भियतनामका प्रतिनिधित्व गर्ने आ–आफ्नो मौलिक शैलीका गुम्बाहरुको सम्मिलनले लुम्बिनीलाई एकै थलोमा अनेक देश दर्शाउने जीवित संग्रहालय बनाएको छ ।
संसारका ६० करोड बुद्धमार्गीहरु मात्र नभई शान्तिप्रेमी जोसुकैका लागि एकमात्र स्वप्नभूमि हो, लुम्बिनी । भगवान् गौतम बुद्धको जीवन–संग्रहालय मानिने यस भूमिमा बुद्धको बाल्यावस्थादेखि बुद्धत्व हुँदै अमरत्वसम्मका ज्ञान दिने पुराता¤िवक अवशेषहरु छन् । भारतको मगध राज्यका तत्कालीन सम्राट् अशोकले तेस्रो शताब्दीमा यो ठाउँ देखेपछि यहाँ एउटा स्तम्भ बनाएर त्यसमा ‘बुद्ध जन्मेको ठाउँ’ लेखेका थिए ।
चौँथो शताब्दीमा यो भूमि टेकेका चिनियाँ तीर्थयात्रु सेन साई पाँचौँ शताब्दीमा आएका फाह सिन र सातौँ शताब्दीका चर्चित चिनियाँ पदयात्री हु एन साङ सबैले लुम्बिनीमा प्राचीन रुख, पोखरी, स्तुप र मन्दिरको वर्णन गरेका छन् । ती सम्पदाहरुको अवलोकनबाट अभिनव स्फूरण र अलौकिक आनन्द प्राप्त हुन्छ । प्राचीनकालको मायादेवी मन्दिर युनेस्कोको प्रत्यक्ष निगरानीमा विश्व सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान नबिग्रने गरी पुनर्निर्माण गरिएको छ ।
भगवान् गौतम बुद्धले १३ वर्षको उमेरसम्म बिताएको ऐतिहासिक सहरका भग्नावशेषहरु भेट्टाउन लुम्बिनीदेखि २७ किलोमिटर पश्चिमको तिलौराकोट जानुपर्छ । कपिलवस्तुको तौलिहवा सहरबाट तीन किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित यो ठाउँ प्राचीनकालमा शाक्य गणराज्यको राजधानी थियो । बौद्ध धार्मिक इतिहासको पहिलो गुम्बा स्थापना भएको यो सहरमा राजा शुद्धोधनको दरबार थियो । उत्खनन् गरी निकालिएको प्राचीन दरबारको दिवार तथा चैत्य र गुम्बाका अवशेष यहाँ देख्न पाइन्छ । त्यस्ता अवशेषहरु पोलेको इंँट र टायलबाट निर्मित छन् ।
चिनियाँ पदयात्री हु एन साङले लेखेको यात्रा–वर्णनमा जीर्ण सहरका रुपमा तिलौराकोट अर्थात् कपिलवस्तुको चर्चा छ । उनले कपिलवस्तुमा १० वटा त्यस्ता निर्जन सहरहरु भग्न अवस्थामा देखेको उल्लेख गरेका छन् । बुद्धकालीन दरबार, बस्ती र गुम्बाहरुको खुला संग्रहालयसँगै यहाँ पुराना स्मारकहरुको छुट्टै संग्रहालय पनि छ जसमा पुराना सिक्का, माटाका भाँडाकुँडा, खेलौनाजस्ता सबुदहरु संकलित छन् ।
तिलौराकोटबाट पाँच किलोमिटरजति दक्षिणमा गएपछि कुडान नामको सानो गाउँ आउँछ । गाउँको परिदृश्यमा भत्केका गुम्बा र स्तुपका डोबहरु प्रशस्त देखा पर्छन् । जनविश्वासअनुसार यो त्यही ठाउँ थियो, जहाँ राजा शुद्धोधनले बुद्धलाई तपस्या गरी फर्किएपछि भेटेका थिए । यो ठाउँलाई कसैकसैले क्राकुछन्द नामका मरणशील बुद्धको जन्मस्थलका रुपमा पनि चिनाएका छन् । यहाँ ध्वजापताकाले सिँगारिएको २५ फिट अग्लो एउटा स्तुप छ । यसलाई कसाया स्तुप भनिन्छ ।
कुडाननजिकै कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौलिहवा अवस्थित छ । त्यहाँबाट पाँच किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा गोटिहवा गाउँ पर्छ । त्यहीँ छ सम्राट् अशोकले बनाएको असली स्तम्भ, तर त्यो भाँचिएर बाँकी रहेको साँढे तीन मिटर अग्लो फेदमात्र देख्न पाइन्छ । पुराता¤िवक पाठशालाको अर्को नमुना गाउँ निग्लिहवा पुग्न तौलिहवाबाट आठ किलोमिटर उत्तरपश्चिम मोडिनुपर्छ । त्यहाँ बुट्ट्यानहरुको बीचमा चारकुने तलाउ छ, जसलाई स्थानीय बासिन्दाहरु ‘निग्लिसागर’ नामले सम्बोधन गर्छन् ।
तलाउको पश्चिमी किनारमा अशोक स्तम्भका टुप्पोतिर भाँचिएका दुई टुक्राहरु लडिरहेका छन् । मगध सम्राट् अशोकले तीर्थयात्रामा आउँदा यहाँ एउटा स्तुप र स्तम्भ बनाई छाडेका थिए । यी संरचनाहरु प्रख्यात पुरात¤वविद् डा. एलोइस फुहररले सन् १८९५ मा पत्ता लगाएका हुन् । निग्लिहवादेखि थोरै पूर्वपट्टि गएपछि प्राचीन पर्खालको घेराभित्र पुराता¤िवक मह¤वको एउटा जङ्गल छ । शाक्यवंशको शासनकालभन्दा पनि पुरानो यो जंगलको नाम अरोराकोट हो ।
तौलिहवाबाट १२ किलोमिटर उत्तरमा सागरहवा भन्ने जङ्गल फेला पर्छ । जङ्गलबीचमा चारकुने आकारको एउटा विशाल तलाउ छ, जसको नाम लम्बुसागर हो । माटोमा पुरिएको यो तलाउ सन् १८९५ मा उत्खनन् गर्दा पत्ता लागेको थियो । पुरात¤वविद्हरुको अनुमानमा यही सागरको दक्षिण–पश्चिमी छेउतर्फ शाक्य वंशको आमहत्या गरिएको दरबार थियो । त्यो ठाउँ पुगेपछि विक्रम संवत् २०५८ जेठमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश विनाश भएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रको विलियार्ड बैठक हलको भग्नावशेष याद आउँछ । सागरहवामा पनि शाक्य वंशले शाहको जस्तै नियति व्यहोरेको इतिहास छ ।
गौतम बुद्धको मावली अर्थात् रानी मायादेवीको माइतीगाउँ देवदह लुम्बिनीदेखि ५४ किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ । देवदह प्राचीन कोलीय राज्यको राजधानी थियो । शाक्य र कोलीयहरुबीच वैवाहिक सम्बन्धको परम्परा थियो । यहाँ पनि अशोक स्तम्भको भग्नावशेष छ । प्राचीन कुवा, पर्खाल, मन्दिर, बुद्धकालीन मानिएको भीमकाय पाकरीको रुखजस्ता चीजहरु यहाँ दर्शनीय छन् ।
बुद्ध जन्मस्थलभन्दा ६० किलोमिटर पूर्वमा रहेको रामग्राम प्राचीन अधिराज्य थियो । त्यहाँका राजा बुद्धको अस्थी धातु (अस्तु) प्राप्त गर्ने आठ राजाहरुमध्येका एक थिए, जसले त्यही धातु राखेर त्यहाँ पेगोडा शैलीको बुद्ध स्तुप बनाए । त्यसपछि त्यो ठाउँ बुद्धमार्गीहरुका लागि एक अटल आस्थाको तीर्थ बन्न पुगेको थियो । रामग्राम पेगोडाका विषयमा एउटा किंवदन्ती पनि छ ।
सम्राट् अशोकले रामग्रामलगायत गौतम बुद्धको अस्थी धातु राखिएका विभिन्न अधिराज्यका आठवटै स्तुप भत्काएर त्यसबाहेक ८४ हजार नयाँ बौद्ध स्तुप बनाउने चाहन्थे । तर, रामग्राम स्तुपमा नियमित पूजा गरिरहेका राजाले सम्राट् अशोकलाई आफूले भन्दा बढी पूजा, आराधना र समर्पण गर्न सके स्तुप भत्काएर अस्तु लैजान दिने सर्त राखे । राजाको बुद्धभक्ति देखेर संसारका कसैले पनि त्योभन्दा ज्यादा समर्पण र भक्तिभाव दर्शाउन सक्दैनन् भन्ने बुझी उनी स्तुप नभत्काई फर्किएका थिए रे ।
लुम्बिनीबाट चितवनको सौराहा आइपुग्न १ सय ६० किलोमिटर सडकयात्रा गर्नुपर्छ । बीचमा पर्ने लुम्बिनी सर्किटका बाँकी दुई स्थलहरु देवदह र रामग्रामको दर्शनले लामो यात्राको थकाइ बिर्साउँछ । सौराहा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेश द्वार हो । लुम्बिनी फेरोको घुमाइ सकेर आएको दिन यहाँ बास बस्न मात्र भ्याइन्छ । बस्नका लागि होटल र लजहरुको चिन्ता छैन । यहाँ पनि लुम्बिनीमा जस्तै गुणस्तरअनुसारका मूल्य छन् । आफ्नो बजेट हेरेर निर्णय लिन सकिन्छ ।
बिहान सबेरै उठेर ब्रेकफास्टपछि बूढीरापती खोलामा डुङ्गायात्रा (क्यानोइङ) का लागि तयार हुनुपर्छ । काठका स–साना डुङ्गाहरु तयारी अवस्थामा देखा पर्छन् । त्यसैमा चढेर क्यानोइङ गर्ने सौराहानजिकैको बाघमाराबाट खोरसोरसम्मको जलमार्ग छ । दुई घन्टाको शान्त जलयात्रामा फाटफुट घडियाल र बाक्लै मगर गोही भेटिन सक्छन् । पानीका माछा टिपेर खाने किङफिसरलगायतका थुप्रै बहुरङ्गी पक्षीको नाचगानले रोमाञ्चकता थप्छ ।
क्यानोइङ टोली अलि ठूलो छ वा यात्रामा हल्लाखल्ला मिसिएको छ भने गोही पानीबाहिर ननिस्किन पनि सक्छ । त्यस कारण, यात्रा शान्त हुनु जरूरी छ । खोरसोर पुगेपछि डुङ्गाबाट ओर्लेर धीत मर्ने गरी गफ गर्न छूट छ । त्यहाँ बूढीरापतीको किनारमै रहेको हात्ती प्रजनन केन्द्रले स्वागत गर्छ । यो नेपालको एकमात्र हात्ती प्रजनन केन्द्र हो, जहाँ मान्छेकै नामसँग मिल्दोजुल्दो अनेक नामका ढोईहरुले छावा हुर्काइरहेका हुन्छन् ।
होटलमा फर्किएर खाना खाइवरी एकछिन आराम लिनु राम्रो । दिउँसो तीन बज्दानबज्दै हात्ती तयार भइसक्छन् । जङ्गलमा पाहुना घुमाउन सौराहामा पालिएका हात्ती दुईथरी छन्– सरकारी र निजी । सरकारी हात्ती चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट सञ्चालित छन् । त्यसैले, ती हात्तीहरु निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्न पाउँछन् । निजी हात्तीहरुलाई भने व्यवसायका लागि निकुञ्ज छिर्ने अनुमति हँुदैन । निकुञ्जभित्र पसेर गैँडा, बाघ, चित्तल, मृगलगायतका जङ्गली जनावर देख्ने आशा छ भने निकुञ्जका हात्ती समात्नुपर्छ ।
एक देखि दुई घन्टाको हात्ती सफारीमा मौकाले साथ दियो भने दुर्लभ जनावरहरुसँग जम्काभेट हुन्छ । कहिले गैँडा देख्न पाइन्छ, कहिले मृगमात्र हेरेर सन्तोष मान्नुपर्छ भने कहिलेकाहीँ एउटै जनावर नदेखे पनि चित्त बुझाएर फर्कनुपर्छ । निजी हात्तीले सयर गराउने बाघमारा सामुदायिक वनमा पनि उस्तै हो । जनावर देखा पर्छ नै भन्ने छैन, तर कहिलेकाहीँ सौभाग्यवश थुप्रै जनावरहरु भेटिन्छन् ।
हात्तीको हिँडाइसँगै हल्लिएको ज्यान कच्ची सडकमा दिनभर यात्रा गरेसरह थाकेर शिथिल हुने हुँदा बेलुकीको खाना नसक्दै निद्राले छोप्न थाल्छ । थकाइ थाम्न सके स्थानीय थारु संस्कृतिको प्रदर्शन र नाचगानले राति अबेरसम्म जगाइराख्छ ।
सौराहा छोड्ने दिन बिहानको गन्तव्य बरन्डाभार जङ्गलभित्रको बिसहजारी ताललाई बनाउनु बेस । पाँचकुने तारा आकारको ताल अनेकौँ देशबाट प्रजनन र सयरका लागि मौसमी बसाइँ सरेर आउने दुर्लभ चराहरुको चरन र क्रीडाकुण्ड हो । तालको किनारमा निस्किएर घाम तापिरहेका मगर गोहीको लस्कर पनि देख्न पाइन्छ । बिहानभर तालको अवलोकन गरी सौराहा फर्किएर खाना खाएपछिको समय आराम गर्ने बेला हो ।
दिउँसोतिर स्थानीय सामुदायिक वनमा चरा अवलोकनका लागि निस्कन सकिने भयो । त्यसपछि बच्ने थोरै समय सौराहाका आदिवासी थारु जातिको संस्कृति अवलोकनमै बित्छ । अपरान्ह चार–पाँच बजेतिर चितवनको पहाडी पैदलमार्ग ‘चेपाङ हिल ट्रेल’ को आधार शिविर मानिने शक्तिखोर बजार पुगेर बास बस्नुपर्छ ।
शक्तिखोरबाट बिहान चियानास्ता गरी चितवन चेपाङ हिल ट्रेल उक्लन सुरू गर्ने । बाटामा ड्राई फुडको स्वादसँग चेपाङको जनजीवन नियाल्दै पहाड चढ्ने । आठ घन्टाजतिको उकालो काटेपछि चितवनको लेकमा अवस्थित हात्तीबाङ गाउँ आइपुग्छ । स्थानीय बासिन्दाले आ–आफ्नो संस्कृतिअनुसार नाचगान गरेर मुटु काम्ने जाडोमा न्यानो स्वागत गर्छन् । पाहुनाका लागि स्थानीय स्वादको दालभात तयार हुन्छ । बास बस्न व्यावसायिक होमस्टेहरु छँदैछन् ।
यात्राको अन्तिम दिन सिराईचुलीबाट सूर्योदय हेर्न साइत पर्छ । हात्तीबाङको होमस्टेबाट बिहान सबेरै उठेर गुराँसका बोट समाउँदै १ हजार ९ सय मिटर अग्लो सिराईचुली चढ्नुपर्छ अनि उँधो बादलको सागर, उत्तरका हिमालयहरु र पूर्वमा लाल सूर्योदय देखेर लठ्ठिन पाइन्छ । फेरि हात्तीबाङ झरेर खाना खाइवरी सुस्ताउँदै पाँच घन्टा ओर्लिएपछि धादिङमा पर्ने पृथ्वी राजमार्गको हुग्दीखोला आइपुग्छ । त्यहाँबाट बसमा चढेर घरको गन्तव्य समातेपछि बाँकी रहन्छ, सुखद यात्राको स्वर्णिम आनन्दानुभूति । यसरी पूरा हुन्छ– गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि गैँडा, गोही र गुराँससँगको गुरू¤व–चक्र ।